APICMO mpanamboatra pharmaceutique ho CMO / CDMO Intermediates
Famolavolana faktiora kely sy mavesatra
Ny serivisy APICMO dia milahatra amin'ny miligrama baolina ho an'ny famokarana betsaka
APICMO ny kalitaon'ny serivisy
Manoloana ny fepetra avo lenta sy ny fepetra famokarana cGMP avy amin'ny vokatra izahay mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra avo lenta ny serivisy sy ny vokatra.
APICMO dia orinasa pharmaceutique izay mamorona ny fampifangaroan'ny zava-mahadomelina vaovao. Izy io dia mifantoka amin'ny famolavolana rafitra sy tekinisialy feno ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana fanafody ary ny orinasa pharmaceutika.
FAMPIANARANA AVY AMIN'NY BIOCHEMICAL INC.
APICMO dia manana ekipa R & D matanjaka sy mpahay siansa za-draharaha - Dr. JACK. Manana orinasa lehibe famokarana sy orinasa famokarana tetik'asa isika. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpiandraikitra ny APICMO dia avy amin'ny firenena mandroso toa an'i Etazonia, Eoropa ary Japon. Mihoatra ny taona 10 tamin'ny traikefa momba ny indostria tao amin'ny orinasam-pambolena multinational. Taorian'ny folo taona farany nananganana ny tsena, APICMO dia manana fikambanana miara-miasa amin'ny orinasam-pambolena.
Ny APICMO dia manome ny tolotra mifandraika amin'ny rafitra hentitra momba ny fiarovana ara-tsosialy (IP) momba ny fiarovana ara-tsaina, mba hiantohana ny tetik'asa atao amin'ny fitondran-tena miafina.
Nandritra ny taona lasa, APICMO dia nanome fampiasana fitaovana manokana sy serivisy manokana. Ny serivisinay dia miompana amin'ny antonta-bolongana bitika kely ho an'ny serivisy manonta lehibe manerantany.
Ny APICMO for Discovery momba ny zava-mahadomelina dia vahaolana miorina amin'ny rahona, izay mandalina ny fahalalana sy ny fahalalana siantifika mba hanehoana ireo fifandraisana tsy fantatra sy miafina izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny mety ho fisian'ny fandrosoana ara-tsiansa.
Ny ekipa fampandrosoana ara-tsimika, izay ahitana mpahay siansa 50 mihoatra ny XNUMX ao Shina, izay mihoatra lavitra noho ny zavatra antenaina noho ny tetikasa sarotra indrindra, miasa ao amin'ny laboratoire-n'ny toetr'andro izay fitaovana amin'ny fitaovana farany sy ny fitaovana fitiliana.
Matoky ireo orinasam-pitondrana manerantany izahay
2016. TANJONA NATAON'I LABORATORIES
Ny serivisy dia: hatramin'ny miligrama ka hatramin'ny kilao an-jatony. Manana ekipa mpikatroka mpikambana ao amin'ny 10 izahay, izay mitantana ny tsenan'ny ankapobeny, mikaroka amin'ny sokajy isan-karazany, ary koa ireo mpamatsy solika, ireo vokatra voatendry, sns.
Ny lokan'ny lokan'ny tsara indrindra
Mendri-pitokisana sy tsy mivadika.